Kuchengetedzwa kweboka? | Martech Zone
Chipiri, Zvita 30, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndinoda kuseka kwaGary Larson kubva Rutivi Rurefu mukurumbira:
Makambani anofungidzirwa kuve panjodzi inopesana uye isu tese takagadziriswa kuti pane imwe nzira kuchengeteka muhuwandu:
Une vatengi vangani?
Une nguva yakareba sei uri mubhizinesi?
Ndokumbira utipe isu nezvinyorwa.
Tipe isu nemuenzaniso kesi dzedzidzo dzinoenderana neindasitiri yedu, saizi yekambani, chigadzirwa, sevhisi, nezvimwe.
Isu takaverenga chinyorwa ichi kubva [isa kambani hombe] icho chinopa maonero anopikisa, ndapota tsanangura.
Ngatitarisei pamienzaniso yemombe, uye vatinoteedzera kwemakore:
United Auto Vashandi
Yechishanu Yechitatu Bancorp
PNC Financial Services Boka
United States Hurumende
Aiwa ndatenda, ini handisi kuzotevera mombe chero nguva munguva pfupi.
Dec 31, 2008 pa 11: 03 AM
Ko social media haisi ingori mombe inoshanda here? Ini ndinobvuma kuti kutevera mombe hakusi, iko pachako, chinhu chikuru chekuita, asi pane zvakawanda zvinofanirwa kutaurwa nezvemombe uye mukurumbira. Boka rinotiudza kuti Google inyanzvi yekutsvaga yakanaka, uye ndinobvuma kuti ndakaitevera. Saizvozvo, boka rinoratidza zvigadzirwa zvarinofara nazvo (Apple) uye kusafara ne (GM, Ford).
Mubvunzo ndewokuti, hatisi kufara here nekutevera mombe, kana kuti tinoerekana tasara tichinyengwa kana boka rikasiya zvaraitevera? Mienzaniso mizhinji iri pamusoro panoteverwa nekuwanda kweboka, asi iye zvino rava kuraswa neboka rimwe chete iroro.
Zvita 31, 2008 na2:29 PM
Chaizvoizvo, handifunge kuti social media iboka rinoshanda - tese takapararira munharaunda dzedu dzakazvimiririra (kunyangwe dzakabatana) - mablogiki, twitter, mabhukimaki emagariro, shamwari, Ning network, Akabatanidzwa, Plaxo…. Ndinofunga kuti vanhu vari kutotanga kuumba nharaunda dikidiki dze'diki' kwavanowana vanhu vane zvavanoda zvakafanana, zvavanotenda, dzidzo, matarenda, zvavanofarira uye kwakwakabva.
Google inocheka mibairo zvichienderana nekuenderana kwayo, saka mazwi akasiyana - "akachipa" maringe ne"mutengo wakaderera" anogona kupa mibairo yakasiyana zvachose kune mumwe munhu ane chinangwa chekutsvaga chakafanana… zvichibva pakutsvaga 'kufanana' nevamwe vanhu uye mabacklinks kubva kune mamwe masosi. Google ingangove yamambo wevasiri mombe mhedzisiro mubhuku rangu.
Ndinobvumirana nedzidziso yako yemombe. Ndinongovimba kuti vanhu havachateedzere mombe nebofu… Ini handitengeswi nekuti zvinobuda zvacho zvinogara zvakanaka pane zvakaipa. Ndinoda vanhu vanobvunza zvakajairwa uye vanosundira envelopu.